ယနေ့ခေတ်သည် သတင်းအချက်အလက်များ ပြည့်အီနေသည့် ခေတ်ဖြစ်သည်။ မိမိ သိလိုသမျှကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ခလုပ်တချက် နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် မိမိဦးနှောက်က လက်ခံနိုင်လောက်သည်ထက် ပိုလွန်းနေသည့် အချက်အလက်များ တသီတတန်းကြီး ထွက်ကျလာမည် ဖြစ်သည်။ အဖိုးတန်သည့် အချက်များပါသလို သတင်းယောင်များ၊ သတင်းမှားများလည်း ရောပါလာမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသတင်း အချက်အလက်များကို စိစစ်ဝေဖန်နိုင်စွမ်း၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ နားလည်နိုင်စွမ်းက ပို၍ ပို၍ အရေးပါလာသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဟု ဆိုလျှင် ဝေဖန်ပိုင်းခြား တွေးခေါ်ခြင်း (critical thinking)၊ သမားရိုးကျလမ်းမှ ဖောက်ထွက်၍ တွေးခေါ်ခြင်း (lateral thinking)၊ ပုံဆောင်၍ တွေးခေါ်ခြင်း (metaphoric thinking) စသည်တို့ကို အသိများပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယခုစာစုတွင် လူသိနည်းသေးမည်ဟု ထင်ရသည့် “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” (pattern thinking) အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။
၁၉၉၄-ခုနှစ်က ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ လောကတွင် အလွန် ရေပန်းစားသွားခဲ့သည့် “ဒီဇိုင်းပုံစံများ” Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software အမည်ရသော စာအုပ်တအုပ် ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။ မိမိတို့ ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာအများစုမှာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်၊ အရင်က အလားတူ ပြဿနာများ ရှိခဲ့ဖူးသလို၊ ထိုပြဿနာတို့ အတွက် အဖြေများကလည်း ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြဿနာတိုင်းကို အစမှ စကာ ကျားကုတ်ကျားခဲ အဖြေထုတ်နေရန် မလိုတော့။ ပြဿနာတို့၏ သဘောသဘာဝနှင့် နောက်ခံ အခြေအနေတို့ကို သေခြာစနစ်တကျ နားလည်ရန် ကြိုးစား၍ ယင်းပြဿနာနှင့် ဆင်တူသည့် ပြဿနာဟောင်းများ၏ အဖြေများကို ပြန်လည် အသုံးချနိုင်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် ရှေးယခင်က ရှိခဲ့ဖူးသည့် ပြဿနာတို့ကို စနစ်ကျသရုပ်ခွဲကာ၊ အသင့်ပြန်လည် အသုံးချနိုင်မည့် စံပြအဖြေများကို ထုတ်ပေးထားသည်။ ဤစာအုပ် ထွက်ပြီး မကြာမီပင် “ဒီဇိုင်းပုံစံများ” နှင့် ဆိုင်သည့် အလားတူ စာအုပ်များ တအုပ်ပြီး တအုပ် ထွက်လာသည်။ “ဒီဇိုင်းပုံစံများ” သည် ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးသူများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ပိသုကာများအတွက် တတ်အပ်သည့် ဘာသာရပ်တခု ဖြစ်လာသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးသူများကလည်း “ဒီဇိုင်းပုံစံများ” များကို တွင်တွင်ကြီး သုံးလာကြသည်။
“ဒီဇိုင်းပုံစံများ” ကို အကြောင်းပြု၍ “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” (pattern thinking) ဟူသည့် ဝေါဟာရကို တစတစ သုံးလာကြသည်။ မည်မျှ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော ပြဿနာ ဖြစ်ပါစေ အပေါ်ယံ အသေးစိတ်အချက်များတွင် နစ်မြုတ်မနေဘဲ၊ ပဓာနသည့် အချက်များကို ဆွဲထုတ်ကာ ရိုးရှင်းသည့် ပုံစံတခုအဖြစ် ပြဿနာကို အပေါ်စီးမှ ခြုံငုံသုံးသပ်ရှုမြင် အဖြေရှာနိုင်သည်။ ပြဿနာတို့ကို ထိုသို့ ချဉ်းကပ် အဖြေရှာသည့်နည်းလမ်းကို “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” ဟု ခေါ်သည်။ ဤဝါဟာရကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးမပြုကြသေးသော်လည်း၊ အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်။ မိမိတို့ တွေ့ကြုံသိမြင်သည့် အချက်အလက်များထဲမှ ပုံစံတူ၊ အဆင်တူများကို သိမှတ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် လူ့ဦးနှောက်၏ အရေးပါသည့် ကိစ္စတရပ်ဖြစ်သလို၊ “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” သည်လည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများ အားလုံး၏ အခြေခံ ကျောရိုးပင် ဖြစ်သည်။
“ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း”ကို ဆော့ဝဲနယ်တွင် သာမက သိပ္ပံ၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး စသည့် နယ်ပယ် အသီးအသီးတွင်လည်း အသုံးချနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာ၏ သဘော ကိုယ်တိုင်က လောကမှ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် နိယာမ သဘောတရားများကို ထုတ်ဖော် ရှင်းလင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့သည် အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ စူးစမ်း လေ့လာ၍ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ၊ ဆက်စပ်ပုံများကို ရိုးရှင်းစွာ ရှင်းလင်းပြနိုင်မည့် သဘောတရား ပုံစံကို ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်သည်။ ထို့နောက် ထပ်မံတွေ့ရှိရသည့် အချက်များကို မိမိ တည်ဆောက်ထားသည့် ပုံစံသစ်တွင် ဘောင်ဝင် မဝင် စစ်ဆေးရသည်။ ဤသည်မှာ သိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝပင် ဖြစ်သည်။
“ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” သာဓကတခု အဖြစ် ချားလ်ဒါဝင်၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် သဘောတရား ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပုံကို လေ့လာကြည့်နိုင်သည်။ ဒါဝင်သည် ကမ္ဘာပတ်၍ တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင်မျိုးကွဲများကို ရှာဖွေစုဆောင်း သုတေသနပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ဂလပဂို့စ်ကျွန်းစုတွင် တွေ့ရှိရသည့် စာငှက်မျိုးကွဲများက သူ့ကို အံအားသင့်စေခဲ့သည်။ အချို့ကျွန်းမှ စာငှက်များက ကြီး၍ မာကျောသည့် နှုတ်သီး ရှိကြပြီး၊ အချို့ကျွန်းမှ စာငှက်များက ချွန်ထက်သော နှုတ်သီး ရှိကြသည်။ မျိုးစိတ်တို့သည် ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ မျိုးရိုးလိုက်သည်ဟု ရှေးက လက်ခံယုံကြည် ထားခဲ့ကြသည်။ ယခု သူတွေ့ရှိထားသော အချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်၍ နေသည်။ ထို့နောက် နှုတ်သီး အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များသည် ထိုငှက်တို့ စားသည့် အစားအစာများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ကို သတိပြုမိသည်။ နှုတ်သီး ချွန်၍ သွယ်သော ငှက်များသည် အင်းဆက်ပိုးများကို စားကြသည်။ နှုတ်သီး မာ၍ တိုသော ငှက်များက မြေပြင်ပေါ် ကျနေသည့် သစ်စေ့များကို စားကြသည်။ ရှားစောင်း စေ့ကို စားသည့် ငှက်တို့၏ နှုတ်သီးက ကြီး၍ ချွန်နေကြသည်။ မျိုးစိတ်တို့သည် မိမိတို့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေမြေသဘာဝအလိုက် ပြောင်းလဲနေပုံကို ဒါဝင် နားလည် သဘောပေါက်လာသည်။
ဒါဝင်သည် သူငယ်စဉ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် မားလ်သပ်စ်၏ “လူဦးရေတိုးပွားမှု သဘောတရား စာတမ်း” (Thomas Malthus’s Essay on the Principle of Population, 1798) ကို ပြန်၍ အမှတ်ရသည်။ ထိုစာတမ်း၏ အနှစ်ချုပ်သဘောမှာ စာနပ်ရိက္ခာ အထွက်နှုန်းက ပုံမှန်သာ တိုးတက်နေသော်လည်း၊ လူဦးရေက ဆပွားနှုန်းဖြင့် တိုးတက်နေသဖြင့်၊ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှုဘေး၊ ကပ်ရောဂါဘေးနှင့် စစ်ဘေးတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ကြရလိမ့်မည်၊ နောင်မျိုးဆက်တို့သည် မိမိတို့ ဘဝ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန် ရုန်းကန်ကြရမည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဒါဝင်က ထိုစာတမ်းကို ပြန်၍ ဖတ်သည်။ ထို့နောက် ထိုသဘောတရားနှင့် မိမိ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များကို ပေါင်းစပ်ကာ၊ “မျိုးစိတ်တို့သည် မိမိတို့ ရှင်သန်သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလိုက် ကွဲပြားပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေကြသည်။ သဘာဝတရားနှင့် အသင့်တော်ဆုံး မျိုးစိတ်က ဆက်လက် ရှင်သန်ပွားများကြသည်” ဟူသည့် သဘာဝရွေးချယ်မှု (Natural Selection) နှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ် သဘောတရား (Theory of Evolution) ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ စင်စစ် ဒါဝင်သည် သူ့ယခင်က သုတေသီတို့ စုဆောင်းခဲ့သည့် အချက်အလက် အများအပြားကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသူများက သူတို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို ပုံစံဖွဲ့၍ မတွေးနိုင်ခဲ့ကြ။ ဒါဝင်ကမူ လေ့လာတွေ့ရှိသည့် အချက်အလက်များကို “လူဦးရေတိုးပွားမှု သဘောတရား” ပုံစံနှင့် ဆက်စပ်ကာ၊ ပုံစံသစ် တခုဖွဲ့၍ စဉ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။
ကားလ် မာ့က်စ်၏ သမိုင်းအမြင်မှာ သမိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” သာဓကတခု ဖြစ်သည်။ သူက လူ့သမိုင်း ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုလုံးကို ကုန်လုပ်ဆက်ဆံရေးနှင့် လူတန်းစားပဋိပက္ခ ရှုထောင့်မှ ခြုံငုံ၍ ရှုမြင်သည်။ လူ့သမိုင်းသည် သမိုင်းဦး ဘုံမြေခေတ်၊ ကျွန်ပိုင်ရှင်ခေတ်၊ မြေရှင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်ဟူ၍ ကြောင်လိမ်လှေကား သဖွယ် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ဟု ပုံစံထုတ်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သမိုင်းဦး ဘုံမြေခေတ်ကလိုပင် လူတန်းစားခွဲခြားမှု မရှိတော့ဘဲ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု တရပ်လုံးကို ဘုံပိုင်ဆိုင်သည့် ခေတ်သို့ ရောက်ရမည်၊ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားတို့ အောင်ပွဲခံရမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ မာ့က်စ်၏ အတိတ်သမိုင်းကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံမှာ ရှင်းလင်းထိရောက်သည်။ သမိုင်း၊ လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့် နိုင်ငံရေးနယ်တို့တွင် အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် အများသိသည့်အတိုင်း “ပစ္စည်းမဲ့တို့ အောင်ပွဲခံ၍ သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကြီး နိဂုံးချုပ်တော့မည်” ဆိုသည့် အနာဂတ်ဟောကိန်းကတော့ သူနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့ မျှော်မှန်းသလို ဖြစ်မလာခဲ့။ “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” တွင် အားသာချက်ရှိသလို အားနည်းချက်လည်း ရှိပါသည်။ အားသာချက်သည် ပြဿနာ၏ ရင်းမြစ်နှင့် ပဓာနအချက်များကို ဆွဲထုတ်၍ ရိုးရှင်းအောင်ပြုခြင်း (simplification)၊ ရိုးရှင်းသည့် ပုံစံတခုအဖြစ် ရှုမြင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြဿနာ၏ အခြားအရေးပါသည့် အကြောင်းတရားများ၊ အခြေအနေများကို မျက်ကွယ်ပြုကာ လိုသည်ထက်ပို၍ ရိုးရှင်းအောင်ပြုခြင်း (over-simplification)၊ မိမိ တွေးခေါ်ထားသည့် ပုံစံအတွင်းသို့ အတင်းဇလုပ်တိုက်၍ သွင်းကြည့်ခြင်း၊ မိမိတို့ တည်ဆောက်ထားသည့် ပုံစံခွက်ကြီးအား လှေနံဓားထစ် ဖက်တွယ်မိခြင်းတို့သည် “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” ၏ ထောင်ချောက်များပင် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ နောက်ထပ် သာဓကတခုအဖြစ် ဟန်တင်တန်၏ “တတိယလှိုင်း – ၂၀-ရာစု နှောင်းပိုင်း ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်း” (Samuel Huntington’s The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1992) စာအုပ်ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဟန်တင်တန်သည် ၁၉၇၄-ခု ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ဇော်မွှားပန်းတော်လှန်ရေး (Carnation Revolution) က စတင်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီ တတိယလှိုင်းမှ နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်၏ သဘောလက္ခဏာများကို စနစ်တကျ သုတေသနပြုကာ၊ အောက်ပါအတိုင်း ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းပုံ ပုံစံလေးမျိုးကို ထုတ်ပြထားသည်။
(၁) Transformation – အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်တိုင်က အပြောင်းလဲကို စတင်ဖော်ဆောင်ပေးခဲသည့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (စပိန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဘရာဇီး စသည့် နိုင်ငံများ)
(၂) Replacements – အတိုက်အခံအုပ်စုက အာဏာရှင် အစိုးရကို ဖြုတ်ချ ဖယ်ရှားလိုက်သည့် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှု (အရှေ့ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ အာဂျင်တီးနား စသည့် နိုင်ငံများ)
(၃) Transplacement – အတိုက်အခံနှင့် အာဏာရှင်အစိုးရတို့ ငြိနှိုင်းဆွေးနွေးကာ အာဏာရှင်က အတိုက်အခံအား နေရာ ဖယ်ပေးသည့် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှု (ပိုလန်၊ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား၊ ဗော်လီဗီးယား၊ နီကာရာဂွါ စသည့် နိုင်ငံများ)
(၄) Interventions – ပြင်ပ အင်အားကြီး နိုင်ငံများက ကြားဝင်စွက်ဖက်၍ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ကူးပြောင်းမှု (ဂရင်နာဒါ၊ ပနားမား စသည့် နိုင်ငံများ)
ဟန်တင်တန်သည် ထိုသို့ ပုံစံလေးမျိုး ခွဲခြားပြရုံသာမက ပုံစံ တခုချင်းစီ အတွက် ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်း အောင်မြင်စေရန် လိုက်နာသင့်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များလည်း ထည့်သွင်း အကြံပေးထားပါသည်။ အဆင်တူ ပြဿနာများအတွက် စံပြအဖြေကို ထုတ်ပေးထားသည်။ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှု အောင်မြင်ရေးအတွက် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေမည့် စံပြအဖြေကို အသင့်ယူသုံးနိုင်သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းတိုင်းများကို ဤပုံစံလေးမျိုးတွင် ထည့်သွင်းကြည့်၍ ရ-မရ ဆိုသည်က မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်သည်။ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သလိုပင် “ပုံစံဖွဲ့၍ တွေးခေါ်ခြင်း” သည် ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်တော့ မဟုတ်။ ထောင်ချောက်များလည်း ရှိနေနိုင်သည်ကိုတော့ သတိပြုကြရမည် ဖြစ်သည်။
Trip to Rocky Mountains (June 21, 2017)
Living at Colorado right next to the Rocky Mountains means it isagreat place for adventurous people as it creates opportunities like hiking for them. I live in Longmont, Colorado which is about an hour drive to the entrance of the Rocky Mountain National Park. The park is known for its high altitude roads and the scenic view.
Even though my family were not very adventurous, my elder brother who happened to be in Colorado for two weeks was very enthusiastic of driving in America. In fact, my father had just planned this tripaday before we went there. It was our first time visiting the park since we arrived in August and probably the first I have ever been so high up withacar. My whole family were excited as we only got this chance because my brother was here since my father was only an amateur driver.
On the way to the park, we drove through Estes Park, which is another tourist attraction in Colorado that we visitedafew months ago. After about 10 minutes driving past Estes Park, we finally reached the entrance to the Rocky Mountain National Park. The entrance fee was $20 per car and to be honest I thought it was expensive. The ranger gave usamap as well so we could havealook at the popular places to go since the place was just enormous.
Along the way, there were several pull-offs for car to pull over and take in the scenery. We stopped at most of the pull-offs to take picture and just enjoy the breeze. One thing that amazed me was that there were still ice from winter even though it was already June which was the start of summer. We reached the highest point of the trail after about 30 minutes and its wasastaggering 13,000 feet high which is aboutathird ofaplane’s cruising altitude.
We descended after taking some pictures and arrived inasmall town called Grand Lake because of the huge lake as the name suggests. We hadapicnic by the beach and after takingarest we decided to head back home.
I was thinking about havinganap in the car but then my father suggested that he will drive back home. I knew I could not sleep for fear of my life and I had to be alert all the way back home since we were still in the mountains area. The drive back home was fine although nerve-wrecking and I could feel my legs shaking when I reached home.
We tookashower and lay down on our beds to rest while posting our pictures on social media to share our experience to our friends. I knew I would not be going onaroad trip for another period time so I treasured my memories from our road trip to Rocky Mountain National Park.
ဘာသာမဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီ တစ်ဦး၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် (Confession ofaBuddhist Atheist) စာအုပ်သည် ၂၀၁၀-ခုနှစ်က Stephen Batchelor ရေးသားထုတ် ဝေခဲ့သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ Atheism ဟူသည်a= without + theos = God/gods မှ ဆင်းသက်လာ၍ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် ဘုရားမဲ့ဝါဒဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ဘုရားမဲ့ဝါဒ တွဲဖက် ဖော်ပြခြင်းသည် သိပ် အထူးအဆန်း မဟုတ်။ သုတ္တန်ဒေသနာ အတော်များများတွင် ဗုဒ္ဓက ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ (ဣဿနိမ္မိတဝါဒ) ၏ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပုံ ခပ်ထေ့ထေ့ သရော်ဝေဖန်ထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် Atheism သည် ထာဝရဘုရားကို မယုံကြည်မှု သက်သက်မျှ မဟုတ်ဘဲ၊ တမလွန်ဘဝ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၊ ငရဲ၊ နိဗ္ဗာန်တို့ကိုပါ လက်မခံသော အယူအဆဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ထာဝရဘုရားမဲ့ဝါဒ” ဆိုသည်ထက် “ဘာသာမဲ့ဝါဒ” ဆိုက ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဆုံးအမ အတော်များများကို (အထူးသဖြင့် သတိပဋ္ဌာန်တရား၊ သစ္စာလေးပါးတရား) လက်ခံ သဘောကျကြသော်လည်း၊ သံသရာနှင့် ကံတရားကို နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိသော၊ အရှေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများမှ ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများကို လက်ခံလိုက်နာလိုခြင်း မရှိသော အနောက်တိုင်းသားတို့ အကြားတွင် ဤစာအုပ်က အတော်လေး ရေပန်းစားသွားခဲ့သည်။ Secular Buddhism ဟူသော အမည်ဖြင့် ဂိုဏ်းဂဏ တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
“ဘာသာမဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီ တစ်ဦး၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်” သည် စတီဗင်ဘက်ချ်လာ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်နှင့် အတွေးအမြင်များကို ပုဂ္ဂလိကရှုထောင့်မှ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောသလို ရေးထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ “ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်” ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း သူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော တိဘက်ရဟန်းတော်ဘဝ၊ ဇင်ရဟန်းတော်ဘဝ ဖြစ်စဉ်များကို ပြန်ပြောရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တဦး ဖြစ်ပါလျှက် တမလွန်ဘဝနှင့် ကမ္မနိယာမတို့ အပေါ် ဘဝင်မကျ၊ လက်မခံနိုင်သည့် သူ့၏ အဖြစ်ကို ဝန်ခံထားသည်။ လူဝတ်လဲပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပိဋကတ်စာပေများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ပိဋကတ်စာပေများတွင် မဟာလူသားဗုဒ္ဓ (Historical Buddha) ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓသည် ဗြာဟ္မဏဝါဒကဲ့သို့ အခြားသော ဘာသာတရားတစ်ခုကို ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းနိုးကြားမှု ဟူသည့် လူ့ယဉ်ကျေးမှုတရပ်ကို ထူထောင်ရန် ဖြစ်သည်ဟူသော ရှုထောင့်မှ ရေးသား ပုံဖော်ထားသည်။ သတင်းစာ စက္ကူ၊ ဓာတ်ပုံ၊ အဝတ်စ စသဖြင့် တိုလီမုတ်စတို့ကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပုံဖော်ထားသည့် collage ခေါ် ပို့စ်မော်ဒန် အနုပညာပုံစံမျိုးဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို သူ့အတွေးအမြင်များ၊ သူ့ ဘဝဖြစ်စဉ်များနှင့် ဟိုတစ ဒီတစ ရောစပ်၍ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓခေတ် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုတွင် မတွေ့နိုင်သည့် ဗုဒ္ဓ၏ ဝိသေသထူးခြားသည့် ဓမ္မတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ္ထုချ ပြသည်။
ဣဒပစ္စယတာ (အကြောင်းကို စွဲမှီ၍ ဖြစ်ရသည်ဟူသည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရား) အခြေခံမူ (The principle of this-conditionality, condition-arising)
အရိယသစ္စာလေးပါးဟူသည့် လုပ်ငန်းစဉ် (The process the four Noble Truths)
သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာ ကျင့်စဉ် (The practice of mindful awareness)
မိမိကိုယ် မိမိ ကိုးစားအားထားမှု စွမ်းအား (The power of self-reliance)
စာအုပ်၏ အခန်းတခန်းတွင် အင်္ဂလိပ်ရဟန်းတော် ဘိက္ခုဉာဏဝီရ၏ အကြောင်းနှင့် ထိုရဟန်းတော်ရေးသားသည့် “Clearing the Path” နှင့် “Notes on Dhammma” စာအုပ်တို့မှ ဗုဒ္ဓဝါဒအား Existential Phenomenology ရှုထောင့်မှ ချဉ်းကပ်ပုံကို ထုတ်နှုတ်ရေးသားထားသည်။ ဘိက္ခုဉာဏဝီရ၏ ငယ်နာမည်သည် Harold Musson ဖြစ်၍ နောင်တွင် ဘိက္ခုဉာဏမောဠိ ဖြစ်လာမည့် Osbert Moore နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသော အခန်းဖော် မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ Harold Musson သည် ဆေးရုံတက်စဉ် ဖတ်မိသော Julius Evola's The Doctrine of Awakening စာအုပ်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စား သွားခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို အီတလီဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပင် ပြန်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် လူ့ဘောင်လောကကို ငြီးငွေ့နေသော Harold Musson နှင့် Osbert Moore တို့သည် သီရိလင်္ကာသို့ သွားရောက်ကာ ရဟန်းပြုခဲ့ကြသည်။ ဘိက္ခုဉာဏမောဠိသည် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၊ အဋ္ဌသာလိနီ၊ သမ္မောဟဝိနောဒနီ၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်၊ နေတ္တိ၊ ပေဋကောပဒေသ၊ ပါတိမောက္ခ စသည့် ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာများကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ခဲ့၍၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓစာပေလောကတွင် ထင်ရှားသော ရဟန်းတော်တစ်ပါး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘိက္ခုဉာဏဝီရကမူ အဘိဓမ္မာနှင့် အဋ္ဌကထာအဖွင့်များကို လက်မခံဘဲ သုတ္တန်နှင့် ဝိနည်းကိုသာ ဓမ္မအစစ် အဖြစ် လက်ခံထားသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘိက္ခုဉာဏဝီရက ကံနှင့် ဘဝသစ်ဖြစ်ခြင်းကိုမူ သုတ္တန် ပိဋကတ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လက်ခံသည်။ ထိုထက်ပို၍ ရှင်းလင်း သက်သေပြမှုမျိုးကို လက်မခံ။ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျ သို့မဟုတ် ယုတ္တိဗေဒနည်းဖြင့် ရှင်းလင်းချက်များကို လုံးဝ လက်မခံ။ ကံနှင့် ဘဝသစ်ဖြစ်ခြင်း သာမဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်တခုလုံးကို သိပ္ပံရှုထောင့်မှ ချည်းကပ်ပါက အမှန်တကယ် နားလည်နိုင်မည်မဟုတ် ခံယူထားသည်။ ကံနှင့် ဘဝသစ်ဖြစ်ခြင်းသည် အရှိကို အရှိအတိုင်း ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်ကံတွေ အကျိုးပေးရသည်၊ ဘာကြောင့် ဘဝသစ်ဖြစ်ရသည်ကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နေရန် မလိုတော့၊ ရှင်းပြနေရန် မလိုတော့ဟု ယူဆသည်။ “အကယ်၍များ မိမိ၏ အယူအဆများသည် သုတ္တန်ဒေသနာတို့နှင့် ကွဲလွဲနေပါက သုတ္တန်ဒေသနာတို့က မှန်၍ မိမိမှားသည်။ ဤသည်မှာ သုတ္တန်ဒေသနာတို့အပေါ် မိမိ၏ သဘောထားပင် ဖြစ်သည်” ဟု ဘိက္ခုဉာဏဝီရက အတိအလင်း ဆိုခဲ့သည်။
ဘိက္ခုဉာဏဝီရ၏ စာများကို စတီဗင်ဘက်ချ်လာက သဘောကျသည်။ ယခင်က သူရေးသားခဲ့သည့် Alone with Others: An Existential Approach to Buddhism (1994) နှင့် Buddhism Without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening (1997) ဟူသည့် စာအုပ်များတွင် ဘိက္ခုဉာဏဝီရ၏ လောင်းရိပ် မကင်းပုံကို တွေ့နိုင်သည်။ ရှေးဘဝ နောက်ဘဝတို့သည် ရှိသည်ဟု သက်သေ မပြနိုင်သလို၊ မရှိဟုလည်း သက်မပြနိုင်ဟူသည့် Agnosticism ရှုထောင့်မျိုးမှ တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ယခု Confession ofaBuddhist Atheist စာအုပ် တွင်မူ ဘိက္ခုဉာဏဝီရက “တမလွန်ဘဝ၊ နတ်ဘုံ၊ ဗြဟ္မာဘုံ၊ ကံတရား” တို့ကို သံသယဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှု မပြုနိုင်သည့် အပေါ် အားမရသလို ဝေဖန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဗုဒ္ဓက ရှေးဘဝ နောက်ဘဝကို မဟောခဲ့၊ ဘာသာတရား အသစ်တခုကို ဖန်တီးရန် မရည်ရွယ်ခဲ့၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှု လူ့ဘောင် အသစ်တခု ဖန်တီးရန်သာ အားထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စတီဗင်ဘက်ချ်လာက ကောက်ချက် ချလိုက်သည်။
စင်စစ် ဗုဒ္ဓဝါဒကို မျက်ကန်းယုံကြည်မှု၊ နာမ်ဝါဒ၊ ဂမ္ဘီရဝါဒ၊ သဿတဝါဒ အစွဲအလမ်းများဖြင့် ချည်းကပ်၍ မရနိုင်သလို၊ သံသယဝါဒ၊ ရုပ်ဝါဒ၊ သိပ္ပံဝါဒ၊ ဥစ္ဆေဒဝါဒ အစွဲအလမ်းများဖြင့်လည်း ချည်းကပ်၍ မရနိုင်။ ဗုဒ္ဓဝါဒကို မျက်မှောက်ဘဝရှုထောင့် Secularism သက်သက်မှ ချည်းကပ်ခြင်းဖြင့် လက်ရှိဘဝကို အကောင်းဆုံး နေထိုင်သွားနိုင်မည့် ဘဝနေနည်းကို ရနိုင်သည်မှန်သော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓဝါဒ၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်သည့် သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရာ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ပန်းတိုင်မှ လွဲချော်သွားမည် ဖြစ်သည်။
Labels: book review, ဓမ္မမှတ်စု, ဧရာ
Education ကို ျမန္မာတို႔က “ပညာေရး” ဟု ဘာသာျပန္သည္။ အိႏၵိယတို႔ကမူ “သိကၡာ Śikṣā” ဟု ဘာသာျပန္သည္။ “သိကၡာ” သည္ ဟိႏၵဴ၊ ပါဠိ၊ သကၠတ ဘာသာစကားတြင္ “သင္ယူျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဗုဒၶသာသနာတြင္ သိကၡာကို သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာဟု အဆင့္သံုးဆင့္ ပိုင္း၍ ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “သိကၡာ” ဟူသည္ မိမိ၏ သႏၲာန္တြင္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ စူးစိုက္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ အမွန္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္သည့္ ပညာတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ ေလ့က်င့္ သင္ယူရသည့္ ျဖစ္စဥ္ တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔က Education ကို ပညာေရးဟု ဘာသာျပန္ သံုးစြဲျခင္းသည္ သိကၡာသံုးပါး အနက္ ေခါင္ကို ကိုင္၍ ေျပာလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ပညာေရး၏ က်ယ္ေျပာေလးနက္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားထက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ား၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကိုသာ ေျပးျမင္တတ္ၾကသည္။ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္၍ ပညာေရးသည္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ လံုးဝ မွားယြင္းေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မမွန္။ ပညာေရးသည္ အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ (cognitive skills) ထက္ျမက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ သာမက၊ ကိုယ္က်င့္ စ႐ိုက္ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ စာရိတၱပညာေရး (character education) လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ပညာေရးကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ သက္သက္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ျခင္းသည္ ပညာေရး တခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ မျမင္ဘဲ၊ အစိတ္အပိုင္းေလးတခုကိုသာ ကြက္၍ ျမင္ျခင္းႏွင့္ တူသည္။
စာရိတၱပညာေရး ဟူသည္ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္။ ေရွးယခင္က အေနာက္တုိင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႕တိုင္းမွ ျဗဟၼဏပညာေရး၊ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ပညာေရးတို႔တြင္ ျဖစ္ေစ စာရိတၱပညာေရးသည္ ပညာေရး၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉-ရာစုေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀-ရာစုကာလ ေခတ္ပညာေက်ာင္းမ်ား ထြန္းကားလာမွသာ စာရိတၱပညာေရးဖက္တြင္ ေပါ့ေလ်ာ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာမည္မွ် တတ္ပါေစ ကိုယ္က်င့္သီလ မရွိပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္သည္။ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အသိပညာမရွိ ျပန္လွ်င္လည္း လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ေသာဏဒ႑သုတ္မွ ပုဏၰား၏ စကားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ “လက္တဖက္ကို အျခားလက္တဖက္ျဖင့္ ေဆးေၾကာရသလို၊ သီလကို ပညာႏွင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာရ၍ ပညာကို သီလျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာရပါသည္”။
ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ စာရိတၱ (character) ဟူေသာ ေဝါဟာရကို Moral character ႏွင့္ Performance character ဟု ထပ္မံ၍ ခြဲလာၾကသည္။ Moral character သည္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ၾကင္နာသနားမႈ၊ မိမိကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သူတဖက္သားအား ေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တမႈစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေရးပါသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Performance character သည္ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈ အေလွ်ာက္ အလွ်င္စလို မတုန္႔ျပန္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ အလုပ္တခုတြင္ ၾကာရွည္ အာ႐ံုစူးစိုက္ထားႏိုင္ျခင္း၊ အလြယ္တကူျဖင့္ အ႐ႈံးမေပးျခင္း၊ ဇြဲလံု႔လရွိျခင္း စသည့္ အလုပ္တခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ အသိဉာဏ္ စြမ္းရည္တို႔ (Cognitive skills) ကို ပညာအုပ္စုတြင္ ထည့္သြင္း၍၊ Moral characters တုိ႔ကို သီလအုပ္စု၊ Performance characters တို႔ကို သမာဓိအုပ္စုတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သမာဓိအုပ္စုတြင္ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိဟူသည့္ အရည္အေသြးမ်ား ပါဝင္ေနသည္။
၂၀-ရာစု ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ကိုသာ အဓိကထား သင္ၾကားေပးၾကၿပီး၊ စာရိတၱပညာေရးက မဆိုသေလာက္သာ ပါတတ္သည္။ စာရိတၱပညာေရးတြင္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည္သူနီတိကဲ့သို႔ သီလပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အလုပ္တခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ Performance characters ကို တခုတ္တရ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့။ ခရီးသြားဟန္လြဲ ပါသြားသည္သာ ရွိသည္။ ထို႔သို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္လည္း ဗဟုသုတႏွင့္ အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ ထက္ျမက္၍ Intelligence Quotient (IQ) ေကာင္းသူတို႔ကသာ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆခဲ့ၾက၍ ျဖစ္သည္။
၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္ Daniel Goleman ၏ Emotional Intelligence စာအုပ္ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မူ Emotional Quotient (EQ) ဟူေသာ ေဝါဟာရကအေတာ္ေလး ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ Emotional Intelligence ကို မိတ္ဆက္ေပးလာၾကသည္။ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ James Heckman ၏ လတ္တေလာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဘဝေအာင္ျမင္မႈအတြက္ IQ က ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ိဳး၊ ဆုလဒ္ရမည္မဟုတ္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို စိတ္ရွည္ရွည္ထား၍ လုပ္ႏိုင္သည့္ ဇြဲ၊ တာဝန္သိစိတ္၊ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈစသည့္ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ မဆိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေတြက (non-cognitive skills) က ပို၍ အေရးပါေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ပင္ဆာေဗးနီးယား တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ Angela Duckworth ကလည္း IQ ကုိယ္တိုင္က စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ ဇြဲလံု႕လတုိ႔ေပၚမွာ မူတည္ေနေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ သုေတသနမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္တြင္ Performance character ကို ဦးစားေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား အလ်ိဳအလ်ိဳ ထြက္ေပၚလာသည္။
ျမန္မာျပည္မွာလည္း သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာဟူသည့္ သိကၡာသံုးပါး အခ်ိဳးညီညီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္းလာေစလိုပါသည္။
1. Paul Tough, How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character (2012)
2. Matthew Davidson and Thomas Lickona, Smart and Good: Integrating Performance Character and Moral Character in Schools (2007)